UN Security Council finally losing patience with Myanmar – CRM
Posted on December 23, 2017 Author swelsone
WASHINGTON – The State Department said Friday the U.S. is considering further actions against those responsible for “ethnic cleansing” of Rohingya Muslims, afteraMyanmar general was blacklisted and Democratic lawmakers called for more military officers to face sanctions. Rep. Eliot Engel, the top-ranking Democrat on the House Foreign Affairs Committee, contended that Myanmar authorities […]
၀န်ကြီး Tillerson မြန်မာနိုင်ငံသွားမည်
Posted on November 3, 2017 Author swelsone
အမေရိကန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး Rex Tillerson ဟာ နိုဝင်ဘာလလယ်မှာ မြန်မာနိုင်ငံကို သွားရောက်မယ့်အကြောင်း အမေရိကန် နိုင်ငံခြားရေးဌာနက နိုဝင်ဘာလ ၂ ရက်၊ ကြာသပတေးနေ့ရက်စွဲနဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်တခုမှာ ဖော်ပြထားပါတယ်။ နေပြည်တော်ကို နိုဝင်ဘာလ ၁၅ ရက်နေ့မှာ ရောက်လာမယ့် ၀န်ကြီး Tillerson ဟာ မြန်မာအစိုးရအဖွဲ့ ထိပ်တန်းခေါင်းဆောင် တွေ၊ အကြီးတန်းတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့ တွေ့ဆုံပြီး ရခိုင်ပြည်နယ်က လူသားဘေးဒုက္ခဆိုင်ရာ အကျပ်အတည်းကို ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်း ရေး လုပ်ဆောင်ချက်တွေ၊ မြန်မာနိုင်ငံ ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရေးအပေါ် အမေရိကန်ရဲ့ ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဆွေးနွေး မယ်လို့ ထုတ်ပြန်ချက်မှာ ပြောထားပါတယ်။ ၀န်ကြီး Tillerson ရဲ့ အခုခရီးစဉ်ဟာ သမ္မတ ဒေါ်နယ်လ်ဒ် ထရမ့်ပ် အစိုးရအဖွဲ့ တက်လာပြီးနောက်ပိုင်း အမေရိကန်အစိုးရအဖွဲ့ ထဲက မြန်မာနိုင်ငံကိုလာရောက်တဲ့ အဆင့်အမြင့်ဆုံးတာဝန်ရှိသူရဲ့ခရီးစဉ် […]
မြန်မာနိုင်ငံ၊ ရခိုင်ပြည်နယ်ကအခြေအနေတွေနဲ့ ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံဘက် ထွက်ပြေးနေတဲ့ ဒုက္ခသည်တွေအရေးနဲ့ ပတ်သက်ပြီး ဗုဒ္ဓဟူးနေ့က အမေရိကန်အောက်လွှတ်တော်၊ နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီမှာ ကြားနာပွဲတခုလုပ်ခဲ့ပါတယ်။ လက်ရှိ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကော်မတီဝင် လွှတ်တော်အမတ်တွေက သုံးသပ်ပြောဆိုကြသလို ကြားနာပွဲမှာ တက်ရောက် တင်ပြသူတွေကလဲ သူတို့သိရှိထားတာတွေကို အစီရင်ခံ တင်ပြကြပါတယ်။ အပြည့်အစုံကို ကိုကျော်ကျော်သိန်းက ပြောပြပါမယ်။ အောက်လွှတ်တော် နိုင်ငံခြားရေးရာကော်မတီမှာ ၂ နာရီနီးပါးကြာ ကြားနာပွဲတခုလုပ်ခဲ့တာ ဖြစ်ပြီး လက်ရှိ ရခိုင်ပြည်နယ်က အခြေအနေတွေနဲ့ ဖြစ်ရပ်တွေကို လွှတ်တော်အမတ်တွေနဲ့ တက်ရောက်အစီရင်ခံသူတွေက အကျယ်တ၀ံ့ ပြောဆို မေးမြန်း တင်ပြခဲ့ကြတာပါ။ ကော်မတီဥက္ကဌ အောက်လွှတ်တော်အမတ် Ed Royce က ပြောသွားတာမှာ – “ရိုဟင်ဂျာမူစလင်တွေနဲ့ တခြား လူနည်းစုတွေကို မြန်မာအစိုးရက အပြင်းအထန် ရက်ရက် စက်စက် ပြုမူနေတာ […]
Who really attacked the Rohingya Hindus in Rakhine?
Posted on October 9, 2017 Author rightsforburma rightsforburma
Statement by Sweden at the UN Security Council Arria Formula Meeting on Myanmar
Posted on October 13, 2017 Author swelsone